အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအမြင်များရှိသော OCEANFRONT အိမ်ကြီး !! - ATLAS Tenerife®အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း
ပင်မစာမျက်နှာအံ့သြဖွယ်အမြင်များဖြင့်ကြီးမားသော Oceanfront အိမ် !!
အယ်လ်Porís, Arico, Tenerife
ရောင်းရန် - စပိန်နိုင်ငံ၊ ကရီရီယန်ကျွန်းများ၊ တနင်္သာရီတောင်ပိုင်းရှိတိတ်ဆိတ်သောကမ်းရိုးတန်းမြို့ဖြစ်သောအဲလ်ပိုရစ်စ်တွင်အထူးသီးသန့်ပင်လယ်ကမ်းခြေပိုင်ဆိုင်မှု!
Canarian ဒေသသုံးစကား“ Porís” သည်“ သေးငယ်သောသဘာဝဆိပ်ကမ်း” ကိုဆိုလိုသည်။ ကမ်းရိုးတန်းမြို့အပြင်ဆိပ်ကမ်းအပြင်သဘာဝကမ်းခြေနှစ်ခုကိုကမ်းခြေတစ်ခုမှာအဝါရောင်နှင့်အခြားတစ်ခုမှာသဲသောင်ပြင်များ၊ ရေကူးကန်အမျိုးမျိုးနှင့်စူပါမားကက်များ၊ ဘဏ်များ၊ ဆေးဆိုင်များ၊ အရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များအပါအ ၀ င်မြို့၏အခြေခံအဆောက်အအုံများဖြစ်သည်။ အဆိုပါမြို့သည် TF-1 အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့် South Airport၊ Santa Cruz နှင့် Adeje ၏အဓိကခရီးသွားအပန်းဖြေစခန်းများနှင့်အလွန်ကောင်းသောဆက်သွယ်မှုရှိပြီးမိနစ် ၂၀ အတွင်းကားမောင်းနိုင်သည်။
အိမ်သည်သမုဒ္ဒရာ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိသောမြို့ဟောင်း El Porísတွင်တည်ရှိပြီးရေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကားဂိုဒေါင်သို့တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်သောကတ္တရာလမ်းအသစ်နှင့်တိတ်ဆိတ်သောလူနေအိမ်ခန်းမဖြစ်သည်။
မြေညီထပ်: or ည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ သီးခြားမီးဖိုချောင်၊ ကျယ်ဝန်း။ ပွင့်လင်းသောအတွင်းပိုင်းဟင်းလင်းပြင်နှင့်ဂူအိပ်ခန်း ၂ ခန်းပါရှိသည်။
ပထမထပ်: နောက် living ည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်းတစ်ခန်း၊ ည့်ခန်းနှင့်မာစတာအိပ်ခန်းတို့တွင်အံ့သြဖွယ်သမုဒ္ဒရာရှုခင်းနှင့်အတူမြင်ကွင်းကျယ်ပြတင်းပေါက်ရှိသည် !!
ဒုတိယထပ်: သမုဒ္ဒရာနှင့် ၃၆၀ ºတောင်ရှိသောရှုခင်းများနှင့်ဥယျာဉ်ခြံသို့ဥယျာဉ်ခြံအဖြစ်ခြံမြေအနည်းငယ်သာစိုက်ထားသောခေါင်မိုးခင်းနှင့်သင်၏သစ်သီးများသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
အိမ်သည်အခြေအနေကောင်းမွန်ပြီး ၀ င်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ပိုင်ရှင်အသစ်လုပ်ရမည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာမီးဖိုချောင်အသစ်ကိုထည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
El Poris တွင်လှိုင်းကြီးသောအစက်အပြောက်နှစ်ခုရှိသည် - သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်မိနစ်နှစ်နာရီခန့်မှအိမ်မှလမ်းလျှောက်ထွက်နေသည်။
မြေညီထပ်31 140 € ကြည့်ရှုခြင်း
ပထမထပ်21 140 € ကြည့်ရှုခြင်း
ရောင်းမည် စျေးနှုန်းလျှော့ချ! အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်
Montañetaရှိ Orchard နှင့် Patio ပါသောပုံမှန် Canarian အိမ်။
အံ့ Views ဖွယ်ရာရှုခင်းများပါသောကျယ်ဝန်းသည့် Penthouse တိုက်ခန်း!
မြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းများနှင့်ပါ ၀ င်သည့်လုံးချင်းအိမ်။
Icod က de Los Vinos
Plaza Del Drago တွင်ဟိုတယ်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ!
ဆောက်လုပ်ရေး, ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး, ဟိုတယ်, အိမ်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ Terrace နှင့်အတူသီးသန့်ပင်လယ်ကမ်းခြေတိုက်ခန်း!